Safarkii Islaamka ee Qaahira ee cuntada xalaasha ah iyo ducooyin -
9:00 subaxnimo waxaad u baahan tahay inaad ku diyaar garowdo aagga hoteelkaaga ee Qaahira ama Giza. waxaad kaheli doontaa hagahaaga dalxiiska khibrada leh oo sita calaamada magacaaga. Kani waa safar dhaqameed aanad ku booqan doonin oo kaliya Masaajidada laakiin meelaha, Wadooyinka iyo xaafadaha booqashada maalinta Qaahira ee islaamku waxay ka bilaabmi doontaa mid ka mid ah jidadka ugu faca weyn Masar kuwaas oo ah El Moez Le Din Allah Street waa markhaati aftahan ah oo ku saabsan Qaahira taariikhiga ah iyada oo taallooyinka kala duwan lagu faafiyey labada dhinac ee wadada ku taal Sida Bab El Fetouh iyo Bab El Nasr, ka dibna u dhaqaaq dhinaca waqooyiga ee magaalada, El Darb El Asfar, oo ah qaybta ugu qadiimiga badan ee taallada Qaahira ee Islaamka oo aad ku booqato Masjidka Al Azhar, Al Husseen Masaajidka, Masjidka El Aqmar
Booqo Khan EL Khalili Bazaar oo ka mid ah suuqyada ugu faca weyn Masar. halkaasoo aad ka heleyso dukaamo hareeraha waddada ah halkaas oo aad ka iibsan kartid xusuusyo jaban oo Masaari ah.
Ku soo gabagabee safarkaaga maalinta booqashada Al Azhar Park oo ku taal bartamaha Qaahira taariikhi ah isla markaana amar ku bixisa muuqaalka quruxda badan ee Qaahira maadaama ay ku taal dhulka sare ee ka caawinaya in la arko Muuqaalka Muuqaalka Magaalada Qaahira.
Fiiro gaar ah: Qado ayaa lagu daray Makhaayada Deegaanka inta udhaxeysa booqashooyinka laakiin Cabitaanada kuma jiraan
Dalxiisku wuxuu ku eg yahay hudheelka macaamiisha qiyaastii 15:00 pm